सातामै ७०० प्रतिशतले बढ्यो कोरोनाको मृत्युदर « Sudoor Aaja
१८ बैशाख २०७८, शनिबार ०७:५२
सातामै ७०० प्रतिशतले बढ्यो कोरोनाको मृत्युदर
सुदूर आज १८ बैशाख २०७८, शनिबार ०७:५२
नेपाली सेनाले व्यवस्थापनका लागि पशुपतिनाथ परिसरस्थित विद्युतीय शवदाह गृहमा ल्याएको कोरोना संक्रमितको शव।
काठमाडौं– दोस्रो लहरको कोरोना संक्रमण फैलिएसँगै नेपालमा मृत्युदर ह्वात्तै बढेको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार पछिल्लो एक सातामा कोरोना संक्रमणबाट हुने मृत्यु ७०० प्रतिशतले बढेको छ। साता दिन अघिसम्म दैनिक ५–६ जनाको मृत्यु भइरहेकोमा हिजो बिहीबार ३५ जनाले ज्यान गुमाए। आज शुक्रबार ३३ जनाको मृत्यु भयो।
गत शुक्रबार ५, शनिबार १४, आइतबार २८, सोमबार १२, मंगलबार १८, बुधबार १७ र बिहीबार ३५ जनाको मृत्यु भएको छ। पछिल्लो एक हप्ताको मृत्युदरले स्थिति खतरनाक बन्दै गएको प्रष्ट संकेत गर्छ।
संक्रमितको संख्या पनि बढ्दो क्रममै छ। एक हप्ताअघि गत शुक्रबार २ हजार ५ सय ५९ जना संक्रमित थपिएकोमा एक हप्तापछि वैशाख १७ गते शुक्रबार एकै दिनमा ५ हजार ७ सय २७ जना थपिएका छन्। एक साताको अन्तरमा थपिने संक्रमितको संख्या २२३ प्रतिशत बढी हो।
पछिल्लो एक हप्तामा नेपालमा कोरोनाबाट ३१ हजार ९ सय ३२ जना संक्रमित थपिएका छन् भने १६२ जनाको मृत्यु भएको छ। शुक्रबार देशभरका अस्पतालका आईसियूमा ३३१ जना छन् भने भेन्टिलेटरमा ११५ जना कोरोना संक्रमित छन्।
बाँके, सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलाली र कञ्चनपुरमा बिरामीले अस्पतालमा भर्ना पाउन छाडेका छन्। काठमाडौंका सबैजसो अस्पताल संक्रमितले भरिभराउ छन्। टेकु अस्पतालमा बिरामी भरिएका छन्। नयाँ संक्रमित भर्ना गर्न नसकिने अवस्था रहेको अस्पतालका निर्देशक डा. सागर राजभण्डारी बताउँछन्।
पछिल्लो समय थपिएका संक्रमित गम्भीर लक्षणसहितका रहेको चिकित्सक बताउँछन्। धेरैजसो बिरामी अक्सिजन चाहिने अवस्थाका छन्। चिकित्सक आफैं संक्रमित भइरहेका छन्। पाटन अस्पतालका निर्देशक प्रा.डा. रवि शाक्य अत्यावश्यक कामबाहेक घरबाहिर ननिस्कन आग्रह गर्छन्। भन्छन्, ‘हामीले सधैं मान्छे मरेको देखिरहेका छौं यसलाई गम्भिर रुपले लिइदिनुस्। सबैले स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरिदिनुस्।’ – नेपालसमय
यस्तो छ संक्रमण र मृत्युदर
वैशाख १२ गते
वैशाख १३ गते
वैशाख १४ गते
वैशाख १५ गते
वैशाख १६ गते
वैशाख १७ गते